अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार एप्पललाई "ह्याकर्स" द्वारा ब्ल्याकमेल गरिएको छ आईफोन समाचार
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार एप्पललाई "ह्याकर्स" ले ब्ल्याकमेल गर्दैछ।
रसियामा आधारित समाचारका अनुसार एप्पललाई लाखौं आईओएस उपकरणहरू अनलाइन मेटाउने धम्की दिने ह्याकर्सको श्रृंखलाबाट ब्लैकमेल गर्न सकिन्छ। यस अज्ञात समूहले पूर्ण संख्यामा आईक्लाउड खाताहरू एक्सेस गर्न सक्दछ, साथै लाखौं अन्य इ-मेलहरू जुन उनीहरूको एप्पल आईडीको साथ साइन इन गरेका छन्। यस तरिकाले, खतराहरू लगभग दश दिनमा वास्तविक हुन सुरु हुन्छ, र एप्पल जस्ता कम्पनीमा पहिले कहिल्यै देखेको एक कडा सुरक्षा उल्लंघन ट्रिगर गर्न सक्छ। तिम्रो के बिचार छ? के यो एप्पल लाई ब्ल्याकमेल वास्तविक छ?
यी तथाकथित ह्याकरहरू, जसको पहिलो जानकारी आउँदछ रूस आज, को लागि सुरुमा हामी "चिह्न लगाउनेसँग" समाचार लिन छान्ने छौं। अर्कोतर्फ, समुद्री डाकुहरूले एक सानो रकमको माग गरे जुन उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको कुरा हामीले ध्यानमा राख्यौं भने, माग $$,००० हो।
उनीहरूले आफूलाई टर्की अपराध परिवारको रूपमा पहिचान गरे, र कथित रूपमा ह्याक गरिएको iCloud खाताहरूमा समावेश भएको व्यक्तिगत डाटा मेटाउँदछ यदि तिनीहरूले बिटकोइनमा $ 75.000 भुक्तान गरेनन् वा कुनै अन्य आभासी भुक्तानी प्रणाली जस्तै आइट्यून्स कार्डहरू।। यो वास्तवमै दुबै माग र विधि दुवै एक ठट्टा जस्तो देखिन्छ।
अर्को अप्रिल the अन्तिम म्याद छ, र यस विषयमा थप सत्यता दिन ह्याकर्सले युट्यूबमा एक भिडियो प्रकाशित गरेको थियो (जुन हामीले फेला पार्न सकेनौं), जसमा हामी उनीहरूले कसरी एक वृद्ध महिलाको खाता हैक गर्न सक्छन् भनेर देख्न सक्दछौं। , र इच्छा मा व्यक्तिगत डेटा मेट्नुहोस्। यदि उचित भुक्तानी स्थापित मितिमा गरिएको छैन भने, तिनीहरूले उनीहरूको धम्की पूरा गर्न थाल्नेछन्। यो कसरी हुन सक्दछ, एप्पलले यसको बारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन, न त यो यस्तो देखिन्छ कि यसले कुनै पनि समयमा यस्तो गर्दछ। जे भए पनि, The ,75.000 .,००० सानो परिवर्तन हो कि यो ग्रहलाई विचार गर्दै हामी पृथ्वीको सबैभन्दा धनी कम्पनीको साथ व्यवहार गरिरहेका छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका अनुसार एप्पललाई "ह्याकर्स" ले ब्ल्याकमेल गर्दैछ।
इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई मेमोरीमा तपाईंको "प्रत्यक्ष भिडियोहरू" भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछ
क्यानाडाली रैपर, गीतकार र अभिनेता ड्रेकले एप्पल संगीतमा रेकर्डहरू तोड्दै छ